Umyili wezakhiwo zeFesto Soroka
Umyili wefestile uPeter (Pyotr) uSoroka ubhekisela kwiqela elineentente zabalingani be-fashion baseKraine. Kwaye wakhankqalaza ngokukhawuleza kungekhona kwintlanzi ye-catwalks, kodwa kwisixeko sephondo sase-Sumy. Kwisixeko sommandla, uPetros wayilungisa indlu yefestile phantsi kwegama legama elithi "Petro Soroka" ("Petro Soroka"). I shishini likhula ngokukhawuleza. Ukongeza kwiiofisi ezimele eUkraine, indlu yefestile "Petro Soroka" iyanqoba iRhwebo yaseRashiya. Okwangoku, kukho amasebe eMoscow kunye nomda waseKursk, eBelgorod, eRostov-on-Don.
Umklami uPetros Soroka ugxininise ekugqibeleni "u-couture" ophezulu, kodwa kwiingubo ezisebenzayo "u-pret-porter", ongayigqoba ngaphandle kokuhlazeka. Umyili wefashini ucinga ukuba iimpahla ezifake imfashini kufuneka zifikeleleke kwiindawo ezibanzi zoluntu. Iqoqo zakhe zilungele ukuphindaphinda. I-Sumy brand "I-Petro Soroka" ithatha inxaxheba kwimiboniso emininzi. Kuyinto ethatha inxaxheba eqhubekayo ye "Trade Mark Marks" - iforamu enkulu yabakhi befashini eKiev. Ngolunye uqokelelo lwakhe lulungelelaniswa kubathengi, nayiphina imodeli inokuthengwa ngaphandle kweengxaki kunye nokuzonwabisa.
UPyotr Soroka ukholelwa ukuba kuyimfashini yokugqoka kungekhona nje "iingcingo ezinkulu". Amaphondo anemihlaba enesimo sengqondo kunye neengcamango, kodwa akusoloko enethuba lokufumana izinto ezifake imfashini. Oku kufuneka kulungiswe ngokukhawuleza. Ngoko ke, ukunamathela kukaPetros kwisixeko sakhe esizalwayo kuyaqondakala. U-Soroka uzibheka kuqala kuyo yonke i-designer yeNdlu yeeModeli, kwaye ke kuphela umququzeleli kunye nomkhuthazi. Sekunjalo, ukudala kuyisondele kuye. Ngomsebenzi wakhe, umyili wefashini uthembele kubuhle bokuqala bowesifazane, uzama ukusebenzisa uluntu ngokubanzi.
Izambatho eziphathekayo ezivela kuPetro Soroka
Ukuphakama nokuphelela kwemigca, isitayela esicacileyo kunye kunye nokusebenza, ukubonakaliswa kweengcamango zokuthakazelisa kunye neendlela eziqhelekileyo zemizekelo yobudala - ezi ziingubo ezidalwe nguPeter Sorok kunye neNdlu yakhe yeeModeli. Injongo ephambili yenkosi kukuguqula nayiphi na ibhinqa ibe yinto enhle yokuhle kunye nokuvisisana, ukudala isakhelo esihle kwi-femin figure.
Izambatho ezivela kuPetro Soroka ziyaziwa ngumfazi oqinileyo, imizila enomdla kunye nomgangatho ongenakulinganiswa. Akukuphela nje ukuhambelana nefashoni yanamhlanje, kodwa kwakhona ilindele ukunyuka kwefestile. Siyabulela kule nto, izambatho ezibizwa ngokuthi "Petro Soroka" zihlala zifanelekileyo kwixesha elithile.
Umklami uPeter Soroka wasungula i-Models House ngo-2003. Ukususela kumzuzwana wesiseko, ulawulo oluphambili kumsebenzi walo kukuphuhliswa, umveliso kunye nokuzaliswa kweengubo zamabhinqa kubantu abajoliswe kuzo: iingubo zentsuku zansuku zonke, iimpahla ezimele, iimpahla ezipheleleyo, njl.
Ngenxa yendlela esemgangathweni yokusebenza, udidi oluyingqayizivele, amaxabiso athengiweyo kunye neentlobo ezininzi zeengubo ezivela "Petro Soroka" sele sele zifumene abathengi bayo kunye nabalandeli abazinikeleyo. Imodeli yendlu iqinisekisile imeko yayo yoshishini elithembisayo, elizinzileyo, ekuphuhliseni kunye nokomeleza izikhundla zayo kwishishini lefashoni.
Ngomhla we-2012-2013, ukuqokelela okuyiyo iprovence, i-Bohemia, i-Black & White, i-Alien Romance, i-Wild Orchid, i-Gardener enhle, i-Flower Paradise, i-Magnetism, i-Beaumonde. Iinqununu zentengiso ziqokelele ngokuqokelela izithambathiso zorhwebo: iimpahla, ii-ponchos, izambatho, iingubo, iigebengu, iingubo.
I-OBRANI - i-brand brand entsha
I-Burberry Prorsum Ihotele 2016 Iqoqo
Umkhosi wezemidlalo kwimisebenzi yeeRussia zokuthutha
I-intanethi ye-Intanethi ye-Models.com yakhetha iikholeji ezintle ze-2014
Iimvula ezisixhenxe zeemvula kwiqoqo elitsha le-Adidas izicathulo
Ukushisa kwendlela yokuphefumula, ulwimi kunye namehlo kubantwana
Inkosikazi efanelekileyo kufuneka iphathe njani?
Ukubunjwa kwamagaleli asha
Ukukhetha ikhaphethi yakho ekhaya
I-Cutlets kwisitayela sikaDonbaska
I-Aerobics emanzini - amanzi aerobics
Imiqondiso yabantu yonke imihla
Indlela yokuhlobisa ikhekhe le-Easter ngezandla zakho ngePasika-inyathelo ngamanyathelo eklasi
Ukuhanjiswa okubuhlungu kunye neengcebiso zoogqirha
Isidlo sesondlo sokulahleka kwesisindo
Iikhukhamba zaseKorea ebusika bokupheka ngokukhawuleza - iindlela zokupheka ezithembekileyo ngeenyawo kunye nezithombe. Ukugcinwa kwamakhukhamba eKorea ebusika
Jam kusuka kwintsimbi
Amazinyo kunzima ukwenza, ndimele ndenze ntoni?
Abaqhi kwi-oven microwave
Iingxaki zempilo zokuncelisa nokubeleka